Iindaba -I-China yeyona Bigost Compost Turner-M6300
Ingxelo enkulu yaseChina eTshintshi-M6300 Ingxelo evela kuMthengi
Iindaba zeShishini ngeCompost TUrner
Eyona Tshisi inkulu yaTshayina yajika-M6300
Ingxelo evela kuMthengi
Idilesi yokuSebenza: Ifama yemfuyo emantla e-China
Impahla ephambili ekrwada: Umgquba weenkomo, iigusha
Umthamo woNyaka woMgquba weZilwanyana: Iitoni ezingama-78 500
Ngokwe-Ofisi yoMphathiswa Wezolimo e-China, i-China ivelisa phantse i-4 yezigidi zeetoni zenkunkuma yezilwanyana minyaka le. Njenge fama enkulu yemfuyo emantla e China, ukusebenzisa kakuhle umgquba wezilwanyana kubaluleke kakhulu. Ngoncedo lwe-TAGRM isichumisi somgquba wezilwanyana, ifama yemfuyo iyakwazi ukuguqula, ukuxuba, ukuxuba, kunye nokufaka ioksijini kwizinto ezomileyo zendalo kubandakanya umgquba weenkomo, umgquba weegusha, iindiza nezinye izinto, kwaye uzenze zibe sisichumiso sexabiso.
Ivula Umatshini: I-TAGRM yokuguqula umgquba M6300
Ukusebenza Ububanzi: 6500mm
Ubude bokusebenza: 2500mm
Umthamo wokuSebenza: 3780m³ / h
Njengowona mshini mkhulu we-bio compost ojika umatshini wokujika, umatshini wokwenza umquba we-TAGRM u-M6300 uyilelwe ukuqhubekeka ukuya kuma-3780 cubic meter yomgquba ngeyure ngokuxhomekeke kuhlobo kunye nobungakanani besijiki. Isigubungelo sewindow ezijikajika njengegubu yentsimbi ethe tyaba eneeflegi eziphakamisa umoya wewindows. Kwakhona yamkela hydraulic ulawulo mqengqeleki ephakamisa, ukuqina kunye nokuqina ityhubhu intsimbi ingenamthungo, kwaye mqengqeleki lixhotyiswe ngemela intsimbi manganese intsimbi eyomeleleyo. Uyilo lwenzululwazi yesayensi luvumela ukujika komgquba kutyumze izinto ezingavunyelwanga nge-1/1000 yokusasazeka kwezinto ezibonakalayo kubandakanya ukuxubana okufanayo kunye nokuvuselela, kunye neoksijini kunye nokupholisa.
I-TAGRM ijolise ekukhuseleni inkqubo yendalo yomhlaba. Ngokunceda & ukukhuthaza abantu kwihlabathi liphela ukuba bayisebenzise kakuhle inkunkuma yethu, njengenkunkuma eqinileyo kamasipala, iswill kunye nenkunkuma yokutya, ilindle lezilwanyana, njl., I-TAGRM izama ngako konke okusemandleni ukukhusela umhlaba, kunye nokubonelela ngezibonelelo ngakumbi kwiinkampani ezifanelekileyo .
Cofa apha ngolwazi oluthe kratya malunga I-TAGRM M6300 yokujika kwemfuyo okanye Ingxelo yabathengi yevidiyo ye-M6300.
Ixesha Post: Jul-22-2021